FEM welcomes release of Reuters journalists, Wa Lone and Kyaw Soe Oo — ရိုကျတာသတငျးထောကျမြားဖွဈကွသညျ့ ကိုဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့ လှတျမွောကျလာသညျ့အပျေါ လှတျလပျသော ထုတျဖျောပွောဆိုခွငျးမွနျမာမှ ကွိုဆိုလိုကျပါသညျ။ – Free Expression Myanmar
May 07, 2019 by Coordinator	in News သတငျး
"We are very happy to see Wa Lone and Kyaw Soe Oo freed after 18 months of imprisonment. This isagreat day for them and their families. So many people in Myanmar and worldwide will be celebrating their release," said FEM Director, Yin Yadanar Thein.
"But we should not forget that this has beenatest of Myanmar's new democracy and the test has failed."
"Today, the government has stepped in to rescue these brave journalists. But where were the judges that inademocracy are supposed to protect our constitutional rights? Even though Wa Lone and Kyaw Soe Oo were pardoned by the president, they are still criminals according to the state. This needs to beawake-up call for the judiciary that they need to change, and fast," she added.
'' ၁၈ လ အကွာ ထောငျခခြံရပွီး၊ ဒီနမှေ့ ပွနျလှတျမွောကျလာတဲ့ ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့ကို ကွညျ့ရတာ အရမျးပြျောစရာကောငျးတယျ။ ဒီနဟေ့ာ သူတို့နဲ့ သူတို့ မိသားစုတှအေတှကျတော့ တကယျ့ကို နထေူ့းနမွေ့တျပါပဲ။ မွနျမာပွညျ အပွငျ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာရှိတဲ့ လူအမြားကလညျးပဲ သူတို့လှတျမွောကျလာတဲ့ အထိမျးအမှတျကို ပြျောရှငျစှာ ဆငျနှဲနကွေပါလိမျ့မယျ'' ဟု လှတျလပျသောထုတျဖျောပွောဆိုခွငျးမွနျမာ၏ ဒါရိုကျတာဖွဈသူ ယဉျရတနာသိနျးမှ ပွောပါသညျ။
''ဒါပမေယျ့ ဒီကိစ်စဟာ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီအသဈအတှကျ စာမေးပှဲတဈခုဖွဈပွီး၊ ကရြှုံးခဲ့တယျဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့ မမသေ့ငျ့ပါဘူး။ ဒီနမှေ့ာတော့ အစိုးရဟာ ရဲရငျ့တဲ့ သတငျးထောကျနှဈဦးကို ကယျဆယျပွီး ရှကေို့ ခွလှေမျးရှခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံတဈခုမှာ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေပေးထားတဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့အခှငျ့အရေးတှကေို ကာကှယျပေးဖို့ တာဝနျရှိတယျလို့ ယူဆခံထားရတဲ့ တရားသူကွီးတှကေရော ဘယျနရောမှာ ရှိနခေဲ့ပါသလဲ။ ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့ဟာ သမ်မတလှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့နဲ့ လှတျမွောကျလာပမေယျ့လညျး နိုငျငံတျောက သူတို့ကို ရာဇဝတျသားတှအေဖွဈ မှတျတမျးတငျထားဆဲဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြက တရားစီရငျရေးကဏ်ဍကို လငျြလငျြမွနျမွနျပွောငျးလဲသငျ့နပွေီဆိုတဲ့အကွောငျး လှုပျနှိုးလိုကျတဲ့ တောငျးဆိုမှုလညျး ဖွဈပါတယျ။''
ရိုက်တာသတင်းထောက်များဖြစ်ကြသည့် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့ လွတ်မြောက်လာသည့်အပေါ် လွတ်လပ်သော ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်။
'' ၁၈ လ အကြာ ထောင်ချခံရပြီး၊ ဒီနေ့မှ ပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို ကြည့်ရတာ အရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဒီနေ့ဟာ သူတို့နဲ့ သူတို့ မိသားစုတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို နေ့ထူးနေ့မြတ်ပါပဲ။ မြန်မာပြည် အပြင် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ လူအများကလည်းပဲ သူတို့လွတ်မြောက်လာတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနေကြပါလိမ့်မယ်'' ဟု လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ယဉ်ရတနာသိန်းမှ ပြောပါသည်။
''ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအသစ်အတွက် စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကျရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဒီနေ့မှာတော့ အစိုးရဟာ ရဲရင့်တဲ့ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ပြီး ရှေ့ကို ခြေလှမ်းရွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆခံထားရတဲ့ တရားသူကြီးတွေကရော ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေခဲ့ပါသလဲ။ ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဟာ သမ္မတလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာပေမယ့်လည်း နိုင်ငံတော်က သူတို့ကို ရာဇဝတ်သားတွေအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍကို လျင်လျင်မြန်မြန်ပြောင်းလဲသင့်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း လှုပ်နှိုးလိုက်တဲ့ တောင်းဆိုမှုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။''
Tagged with: Conflict, Myanmar Press Council, National security အမြိုးသားလုံခွုံရေး, Official Secrets Act, Protection of journalists and human rights defenders